I-Semalt ichaza amazwana I-Adjust Your Stratégie De Férencement À Niches Spécifiques
Uma ngabe kukhona isilinganiso sokubambisana phakathi ne-domain, kufanele ufune "SEO" noma "ukukhangisa okuqukethwe" futhi uthola izigidi zezinkampani kanye nezinkampani ezibandakanya ukufaka la visibilité. I-avantage de servir un créneau non conventionnel ou unique is que vous avez moins de concurrence, mais vous avez un public plus restreint et des ressources pour vous aider à réussir. Yini okufanele uyenze ukuze usebenzise i-niches uniques futhi uthuthukise amathuba okubambisana?
uJack Miller, umphathi we-client de la réussite de Semalt , I-partage les conseils isebenzisa ukuthi ubani owenza i-campagne de référencement winner.
Yazi ukulalela kwakho
Ngaphambi kokukhetha konke, qaphela ukuqonda nokuqonda kwakho. Ungakwazi ukuqala ngenye indlela yokuhlola, kodwa wena udinge ukuba uhlanganise nabanye abafuna uklayini, izintandokazi kanye nezifiso zokuqukethwe. Cela ukusiza ukuba ulahlekelwe ama-clichés ngendlela abantu abazenza ngayo, besebenzisa ama-raccourci vers un meilleur matériel qui vous rendre plus approprié pour les besoins de votre auditoire.
Sebenzisa izinhlamvu zamagama ezide eside
Lezi zinsuku zokuqala ukuqala ukucinga ngesikhatsi eside kunesidingo sokuthi umlayezo wakho ufune ulwazi noma izinkampani zakho. Iziphakamiso ze-Hummingbird ne-Panda de Google ziye zaba nethonya elibi kakhulu kuma-keywords, kodwa ama-keywords at longue queues are still pour des uniques uniques. Uma ufuna ukugxila kuma-keywords okunikeza ngaphezulu kwe-trace, sebenzisa imisho emininingwaneni emide, okuyi-question format kanye nempendulo, yizona ezithuthukisa ama-unique uniques.
Ama-original origins kuphela
Noma ukuthuthukisa izici zabanye, thola izimfundiso original originals. Ungakwazi ukukwenza lokhu ukuze uthole ulwazi futhi uthole imibuzo engakaze ibe yilezi zindaba. Cela wena futhi uphendule wena kanye nawe umlando wakho..
Isixazululo sendawo yokudlulisa ama-hors site
Ukuze uthuthukise izintandokazi zakho ze-search organique kanye ne-autorité de domaine, udinga ukujoyina izixhumanisi njengoba kunemiyalezo eqondile. Cela kusho ukuthi wena usebenza ngabasebenzi kanye ne-editedurs conventionnels. Ungakwazi ukufaka okuqukethwe okuyi-partially efanelekayo ukuze uthole i-your forte - kodwa le content kufanele kube usizo for the public de votre éditeur. Lokhu kuhamba kungenza ubophezele ukwenza i-compromise, kodwa izixhumanisi zakho zizothola ukuphakama kwakho.
Funda izimpikiswano zakho
Noma ngabe yiziphi izinkampani ezizimele, xhumana nabo futhi ufunde lokho abakwenzayo ngokuhlukile futhi ungafaki ukwabelana ngemicabango yakho. Akusikho ingozi lapha ngenxa yokuthi wena niche is petite futhi wena ngeke uzimisele.
Ngenxa yokuthi ungenayo imininingwane yokusebenzisa i-campaign yakho ye-referencement, qala kancane. Sebenzisa amagama ambalwa ukuze uthole okuqukethwe ngaphambi kokuba uqalise. Cela you aidera ukuthola qoqo des informations that are cruciales uma you nkulu.
Sebenzisa lezi zinkampani ngoba yiyona ndlela engcono kakhulu abantu abayitholayo. I-social media iyindawo engcono kakhulu yokuthuthukisa i-visibilité yakho ngaphambi kokugxila ezintweni ezenzelwe ukucinga. Lolu hlelo lokusebenza luzosiza ukuba uxhumane nezinkampani ezithintekayo, ukuze uthole imininingwane kanye nokuthuthukisa imiphumela.
Ukudala indawo yomphakathi
Cela kungenziwa ngokusebenzisa iforamu communautaire lapho oxhumana nabo bangena phakathi kwabo. Cela ukugqugquzela u-plus plus fidélité et vous aide à trouver de nouveaux contenus.
Ukunikezwa kokuqukethwe jikelele
Thumela ukuhlelwa komsebenzi wakho kanye nomhlangano wakho wezokukhangisa. Ungakwazi ukukwenza ngokuhlukanisa amabhulogi wakho ngaphansi kwezigaba, kodwa ungalokothi ubheke ku-blogs de niche yakho. Cela wena unikeza umphakathi kanye nomphakathi omkhulu kanye nokuhlanganyela kwakho okuqukethwe Source .